IsiXeko sasePlattsburgh sithintela iMining Bitcoin kunye nezinye ii-Cryptocurrensets | Iindaba zeGajethi
Ukukhawuleza kwemali ye-cryptocurrency kubonakala kungekagqityi okwangoku. Kuba abasebenzisi abaninzi bayaqhubeka nokumba i-Bitcoin kunye nezinye iimali zedijithali. Into ebangela iingxaki kunye nempikiswano kwiimeko ezininzi. Njengoko kwenzekile kwisixeko sasePlattsburgh kwiphondo laseNew York. Ukusukela isixeko sibe sesokuqala ukuthintela ukumbiwa kwemigodi ye-cryptocurrency.
Kuvotwe kwibhunga ledolophu. Kwivoti leyo, ngamxhelo mnye, ibiyiyo Imigodi ye-cryptocurrency ayivumelekanga kwiinyanga ezili-18 ezizayo. Esinye sezizathu zolu sigqibo kukusetyenziswa kwamandla okukhulu okwenziwa yile nkqubo.
Ngamazwi kasodolophu ngokwakhe, uColin Read, isixeko sesinye sezona zinga ziphantsi zombane emhlabeni. Into ekhuthaze abasebenzi basezimayini beBitcoin kunye nezinye iimali ukuba basebenzise isixeko njengeziko labo lezemigodi. Ukusukela Iindleko zombane ziba sezantsi kakhulu.
Kwimeko yasePlattsburgh, kuhlawulwa malunga neesenti ezi-4.5 ngeyure nganye yekilowathi. Umndilili eUnited States umalunga neesenti ezili-10. Ke ingaphantsi kwesiqingatha. Ukongeza, isixeko sinefayile ye- Ixabiso elikhethekileyo leenkampani ezisebenzisa kakhulu umbane. Kule meko, kuhlawulwa iisenti ezi-2. Into ethile abavukuzi beBitcoin abafuna ukuyisebenzisa.
Enyanisweni, uCI-oinmint yinkampani ezinikele kwimigodi yeBitcoin ndaza ndahlala kwidolophu yasePlattsburgh. Phakathi kukaJanuwari noFebruwari inkampani inayo Iipesenti ezili-10 zamandla eedolophu asetyenzisiweyo. Isampulu yemali enkulu yamandla egqitywa yile nkqubo. Ngesi sizathu, ibhunga lesixeko lithathe amanyathelo emva kokuba abahlali bekhalaze ngokunyuka kwamaxabiso kwiimali zabo.
Oko kunikwe ukusetyenziswa kwemigodi yeBitcoin, isixeko kuye kwafuneka sithenge umbane kwintengiso evulekileyo, ebiza kakhulu. Into ebangele amatyala abiza kakhulu kubahlali beedolophu. Ke ngoko, benza esi sigqibo kunye nokumbiwa kwemigodi yeBitcoin kunye nezinye izinto ezigcina imali zisahleli Ukuvalwa iinyanga ezili-18 ezizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Te knoloji » Imali engezantsi yedijithali » I-Plattsburgh iba sisiXeko sokuqala sokuthintela iMigodi yeBitcoin
I-General Electric Aviation iyaphumelela kuvavanyo lokuba iya kuba yintoni na injini enkulu yenqwelomoya emhlabeni
I-MIT ikholelwa ekubeni i-fusion yenyukliya inokulunga kwiminyaka eyi-15 kuphela